Niyadjabsanaan iyo firifircoonaan siyaada ah oo isbedbedela | Suomen Mielenterveysseura
Pekka ooridiisa Marja waxay niyadjabsaneyd oo tabardarneyd muddo dhawr bilood ah. Pekka wuu iskudayay inuu ku cadaadiyo Marja in ay takhtar raadsato, laakiin Marja ma dooneyn iney takhtar la kulanto. Laakiin markii dambe Marja way ogolaatay iney caawinaad raadsato. Caawinaad raadsashadii qasadkiisa waa la gaaray, oo Marjan caafimaadkeedii waa hagaagsanaaday. Waxay ahayd qof aad u firifrcoon oo wax xiiseyn badan, habeenkii saacado yar ayay seexan jirtay iyo hadal badnaan. Adeeg aan muhiim ahayn ayay maalinwalba dooni jirtay, Pekka wuxuu ka baqi jiray in Marja dhaqaale xumo qabsato.
Dhawr usbuuc kadib Marja xaaladdeeda waxay isu bedeshay markale mid murugeysan. Markan Marja xaaladdeeda waa mid ka liidata markii hore ee ay niyadjabsaneyd. Mayasan aheyn qof shaqadeeda aadi karta mana aheyn qof sariirta ka kaceysa maalinkoo idil. Waxay ahayd qof waxba kala jecleen oo oohin badan waxyna Pekka u sheegtay in aysan waxba u hagaageyn. Waxay sheegtey iney dareemeyso shalaayti iyo ceeb la xiriirta hab dhaqankeeda. Pekka walaac iyo cabsi ayaa la soo deristay oo ah iney rejo la’aanteeda awgeed iney isku daydo iney isdisho.
Maxa la gudboon Marja iyo Pekka?
Marja waa iney raadisaa caawinaad sida ugu dhaqsiyaha badan. Xaqiiqdii Marja waa iney raadisaa daryeel sabatoo ah way niyadjabtay, awoodna uma laha iney shaqeysato. Takhtarka caafimaadka shaqaalaha ama takhtar kaleba wuxuu ka wareysan doonaa xaaladdeeda caafimaad, laga yaabaa islamakaaba in Marja ay buuxiso foomka iskubuuqsanaanta, waa foom wareysi ah oo lagu ogaanayo dhimir ahaan iyo niyadjabka. Waa muhiim, in Marja takhtarka u sheegto niyadjabsanaanta ka sokow iney qabtay fudufudeyd badan mararka qaarkood.
Sababtoo ah Marja waxay lahyd dabeecad fudfudeyd saa’id ah iyo niyadjab xooggan, taaso suurtogal ka dhigeysa iney noqoto labamiyirle, oo isbedbedel yeelato marna niyadjabsanaato marna fudfudeyd yeelato taasoo loo yaqaano marxaladda labamiyirlenimada. Daaweynta waxaa laga yaabaa iney gaabis noqoto xilliga marxaladda isbedbedelka, waayo ma dareemayo qofku inuu xanuunsan yahay. Marja waxaa laga yaabaa iney isu aragto iney awood fiican leedahay ee aysan u baahneyn iney daryeel raadiso ama ay isleedahay waxaa kuugu filan fasaxa jirada marka ay ku jirto bilawga hore marxaladda labamiyirlenimada.
Inta badan labamiyirlenida dhimirka waxaa la ogaadaa muddo dheer kadib marka calamadihiisu bilawdeen. Helitaanka daaweyn wanaagsan waxay qaadaneysaa muddo dheer. Kacsanaanta iyo niyadjabka si sahlan ayaa la isugu khaldi kara. Daawada loo qaato niyadjabka ma caawineyso labamiyirlenimada dadka qabo. Haddii runtii la fahmo kacsanaanta waa loo heleyaa daaweyn habboon.
Dadka qaba xanuunka labamiirlenimada ee dhimirka waxaa kaloo caawin kara ogaanshaha calaamadaha la xiriira qasanaanta. Ogaanshahaas daraadeed waa la fahmi karaa astaamaha bilowga ah ee marxaladaha kaladuwan ee xanuunka, ayadoo loo kaashanayo daaweyna waa laga hortagi karaa intuusan fogaanin. Waxaa wanaagsan in Pekka uu goobjoog ka ahaado kulamada takhtarka ee Marja. Si ay labaduma u helaan warbixinno iyo hagid ku saabsan kacsanaanta iyo astaamaheeda.
Haddii marka Marja daryeel raadsashada kadib baaritaanka lagu ogaado xanuunkeedu inuu yahay labamiyirlenimo, waxaan shaki ku jirin in loo bilaabayo nooc daaweynta ka mid ah. Daaweynta waxay noqon kartaa tusaale ahaan mid ka hortag ah taasoo ka hortageys marxaladaha xanuunuka, daawo ku ilaalin ama daaweynta xaalad degdeg ah. Daawo ku ilaalinta joogtada ah waa la joojinayaa, haddii aysan imaan wax ka hortagga isbebdelka ama ay yihiin kuwa waxyeello kale leh.
Daaweynta waxaa kaloo ka mid noqonkara sida sidii diiradda loo saari lahaa maareynta calaamdaha xanuunka si koox ahaaneed. Marja xitaa way anfici lahayd daawenta dabiiciga ee dhimirka, gaarahaan haddii ay haysato culeys dhanka nolosha ah ama murugo aan xal lahayn, kuwaasoo daaha ka qaadi kara soo ifbaxa qasnaanta.
Xanuunka Labamiyirlenimada ee dhimirka dadka qabaa waa in loo qabtaa hawlo camali ah oo habeysan, kuwaas oo ka hortagi kara dhibaatooyinka kale ee soo wajihi kara. Tusaale ahaan xaaladda Marja ee marxaladaha isbedbedelka sida taxadar la’aanta ay lacagteeda u maamuleysay iyo go’aamadii layaabka lahaa ee dhanka shaqada iyo guriga. Marja waxay bangiga ka codsan kartaa in kaarka bangiga loo xadido lacagteeda iyo weliba sidookale xadidaad dhanka telefoonka ah. Haddii ay suurtogal tahay, Marja waxaa wanaagsan in ay dhibkeeda u sheegato horjoogaha shaqadeeda iyo haddii loo baahdo iney qaadato fasaxa jirada oo ayadoo u maraysa dhanka caafimaadka shaqaalaha, haddii aysan awoodi karin iney shaqeeysato xanuunka awgiis.
Labamiyirlenimada waxay kaloo culeys badan saari kartaa dadka xigaalada ah. Marka uu ku jiro muddada isbedbedelka, qofka qaba labamiyirlenimada wuxuu sameeynayaa arrimo badan, kuwaasoo uu u sameeyno xanuunka dardiis. Sida isticmaalka lacagta oo farahiisa ka baxda iyo mararka qaar inuu wax badan isticmaalo mukhaadaraadka ama khamaarka ciyaaro. Xilliga muddada isbedbedelka waxaa kaloo la xiriirin karaa in dhanka galmoodka uu sababo khatar ama ismaandhaaf xooggan oo qofka ku jira xilliga isbedbedelka uu u arko in noloshiisa wax loogu dhimayo.
Arrimaha qasnaanta aad bay muhiim u tahay iney lamaanuhu ama xaasku ogaadaan. Waa in la raadiyaa caawinaad dibadda ah lamaanaha oo wadajira ama reerka oo dhan, caawinaadda waxaa laga raadsan karaa tusaale ahaan qaybta xanaanada qoyska.